News - 2020 Wenzhou Golden Eagle Pump valve Exhibition / International Pump valve Exhibition / Kulakula kulan Oubei yongjia Oktoobar 23
The Wenzhou 15th (Golden Eagle) Pump valve Exhibition / valve Exhibition / valve valve Exhibition / International pump valve Exhibition / pump company / bamka soo saaraha wax soo saarka / waxaa lagu qaban doonaa Wenzhou Yongjia Oubei Fagaaraha Dhaqanka iyo Isboortiga laga bilaabo Oktoobar 23-25, 2020!
Bandhigga 15-aad ee Wenzhou (Golden Eagle) Pump valve Exhibition ayaa la casriyeeyay marka la eego miisaanka, tayada iyo adeegyada soosaara, iyadoo leh 650 waab iyo goob lagu soo bandhigayo oo lagu qiyaasay 20,000 mitir oo laba jibbaaran. Sii wad inaad xoojiso dhagaystayaasha xirfadleyda ah ee gudaha iyo Jarmalka, Talyaaniga, Kuuriya, Singapore, Hindiya, Fiyetnaam iyo kuwa kale ee wax iibsada ee ajaanibta ah waxay abaabulaan casuumaad, iyo ururada ugu dambeeya ee adeegsadayaasha warshadaha waxaa lagu casuumi doonaa inay soo bandhigaan bandhig balaaran oo bamka, qalabka tuubada, sida tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay iyo alaab, beer loogu talagalay warshadaha waalka mashiinka si loo siiyo alaab tayo leh, tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay iyo xalal
PVPEW 15th Wenzhou (Golden Eagle) Bamka waalka Bandhiga waa bandhig carbiska matoorrada xirfadeed ee gudaha, wuxuu noqday dhacdo xirfad leh oo xirfadlayaasha gudaha iyo dibaddaba aysan seegi karin.
Tan iyo wenzhou Jinying Media Co., LTD. Waxaa lagu qabtay bandhig xirfadeed bamka matoorka sanadkii 2004, saameynteeda wey sii fideysay miisaankeedu sidoo kale wuu sii fidayay, wuxuuna noqday mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan warshadaha. Bandhigu wuxuu si guud u soo bandhigayaa xoogga Shiinaha ee bamka iyo warshadaha waalka, gaar ahaan "magaaladii uu ka dhashay Shiinaha bamka iyo waalka"; Dheeraad ah u yeelo muuqaalka iyo saameynta mashiinka Wenzhou iyo warshadaha waalka ee gudaha iyo dibedda; Soo bandhig hibooyin horumarsan oo ajnabi ah, tikniyoolajiyad, maareyn iyo lacag si kor loogu qaado loona badalo warshadaha dhaqanka, kor u qaadista iyo tayeynta qaab dhismeedka warshadaha, loona sii xoojiyo tartanka shirkadaha; Dheeraad dheeraad ah wenzhou bamka waalka warshadaha iibka ganacsiga shisheeye, kordhinta dakhliga sarifka lacagaha qalaad; Waa muhiimad taariikhi ah iyo mid la taaban karo si loo sii xoojiyo horumarka joogtada ah, degdegga ah ee caafimaadka leh ee Yongjia, Wenzhou iyo xitaa bamka Shiinaha iyo warshadaha waalka.
Ka dib sanado badan oo horumarineed, Wenzhou bamka iyo warshadaha waalka ayaa hadda leh in ka badan 3,110 shirkadood, oo ay ku jiraan 523 shirkadood oo leh qiime wax soo saar sanadle ah oo ka badan 20 milyan yuan. Waxaa jira 77 shirkado teknolojiyad sare ah oo noocyo kala duwan ah. Meelaha loo yaqaan 'agglomeration warshadaha' waxay badanaa ku yaalliin Oubei, Longwan iyo Ruian. Sannadka 2019, wadarta qiimaha waxsoosaarka warshadaha ee dhammaan warshadaha waxay gaareen in ka badan 45 bilyan yuan, iyadoo kororka sanad-sannadeedka uu yahay 9%.